2021 Maalinta Shuhadada Uganda waxaa loogu dabaaldegay gebi ahaanba cudurka faafa ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » 2021 Maalinta Shuhadada Uganda waxaa loogu dabaaldegay gebi ahaanba cudurka faafa ee COVID-19
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Dhacdadii sanadkii la soo dhaafay ayaa sidoo kale fure u ahayd helitaanka xujayda oo la joojiyay qufulka coronavirus qaran awgeed.
Kaliya 200 oo xujey ah ayaa sanadkan casuumay sababo la xiriira Cudurka faafa ee COVID-19
Shuhadada Ugaandha waxay ahaayeen marki ugu horeysay abid madaw oo ka soo jeeda wadamada Saxaraha ka hooseeya ee Afrika si loo cibaadeysto
Macbadka Katooliga waxaa laga dhisay goobta ay ku shahiideen St. Charles (Karoli) Lwanga iyo St. Kizito
Dabaaldegyada Sannadlaha ee Maalinta Shuhadada ee Ugandha oo ku beegan 3-da Juun ayaa si weyn loogu dabaaldegay iyadoo 200 oo xujey ah la casuumay sababo la xiriira Cudurka COVID-19 Sanadkii la soo dhaafay, munaasabaddu sidoo kale waxay ahayd fure yar oo helitaanka xujeyda la joojiyay sababtoo ah qufulka qaranka.
Dhismaha 23-acre Namugongo Martyrs Shrine oo ku yaal meel 12 Km u jirta Xarunta Magaalada Kampala wuxuu ahaa magnet xaflado sanadle ah oo ku saabsan kalandarka kaniisadaha Roman Katooliga iyo Anglican ka hor cudurkan, iyadoo soo jiitay ilaa 3 milyan oo xujey ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan, socdaal maalmo iyo toddobaadyo ah. ama ka safraya Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan, Zambia, Malawi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Nayjeeriya iyo meelo ka baxsan qaaradda oo lagu xusayo 45 dhallinyaro Masiixiyiin ah oo diinta qaatay oo ay ku jiraan 23 Anglicans iyo 22 Katooliga oo ku shahiiday intii u dhaxeysay 1885 iyo 1887 xukuma (boqortooyada) Kabaka Mwanga oo ka tirsan Boqortooyada Buganda tijaabo ah daacadnimo kala qaybsan oo u dhaxaysa boqorka iyo iimaanka.
Macbadka Katooliga waxaa laga dhisay goobta ay ku shahiideen St. Charles (Karoli) Lwanga iyo St. Kizito. Waxaa laga dhisay bir, mid kasta oo ka mid ah 22-ka tiir, wuxuu matalayaa mid kasta oo ka mid ah 22 shahiid katoolik ah.
In 1969, Uganda wuxuu ahaa waddankii ugu horreeyay ee Afrika ee booqda Pontiff, markii Pope Paul VI uu u dabaaldegay masaajidkii dhowaan la dhisay ee xuska konton sano tan iyo markii uu garaacay shuhadada Pope Benedict XV ee 1920.
Shan sano ka hor 1964, Shuhadada Ugaandha waxaa lagu xereeyay St.Peter's Basilica ee Rome taasoo ka dhigaysa inay yihiin kuwii ugu horreeyay abid madaw ee ka yimaada Afrika-Saxaraha ka hooseeya.
Markuu Pope John Paul II booqday 1993, wuxuu sare u qaaday Masaajidka Minil Basilica ee 1993.
Sannadkii 2015, markii booqashadii Pope Francis ay xaqiijisay Vatican-ka, dowladda Uganda iyo Archdiocese of Kampala waxay ku yabooheen $ 24 milyan si loogu casriyeeyo Masaajidadii uu markii hore riyadeeyay Monsignor Mbwega (Wadaadka Parish 1954-1980) oo ah goob caalami ah oo caalami ah. oo u taagan diinta kiristaanka iyo dalxiiska iyadoo dib loo dhisayo taambuugda hareeraha harada Shuhadada.
Intii ay socdeen injineerada dib u dhiska waxay qodayeen harada si loo hubiyo in culeyska Mbwega oo ay ku calaacalayaan heesaha shimbiraha oo lagu darayo naqshadaha si loo ilaaliyo xasilloonida mowqifka barakaysan.
Diyaaradda Airbus ayaa soo rogtay dalab diyaaradeed oo cusub oo ka yimid Qatar Airways January 21, 2022
Duulimaadka koowaad ee F-16 Fighter Sare ee gardarrada hadda waa la dhammaystiray January 20, 2022
Daawaynta Cusub ee Ba'an ee Madax xanuunka January 20, 2022